Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်များကို ၂၀၁၈ NAB ပြပွဲတွင်ပြသမည် NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်များ
2018 NAB ပြရန် ႀကိဳတင္ၾကည့္
Autoscript နှင့် Autocue
ဧပြီလ 7-12, Las Vegas မှ
အဆိုပါ 2018 မှာ Display ကိုအပေါ် Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်များ NAB ပြရန်
2018 မှာ Autoscript NAB ပြရန်: Intelligent သတိပေး
Autoscript ဘက်ပေါင်းစုံ 19 လက်မအရွယ်အခွက်တဆယ်မော်နီတာနှင့် software ချက်ချင်း WinPlus-IP ကိုအတူ EPIC-IP24XL teleprompter featuring က၎င်း၏ All-သစ်ကို Intelligent ချက်ချင်းမိသားစုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆုရ IP ကိုအကွာအဝေးယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ပို့ဆောင်နေသည်နှင့် 2018 မှာသစ်ကိုနဲ့ controller နှင့်အပိုဆောင်းမော်နီတာတွေနဲ့တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန်.
ချက်ချင်းအသိဉာဏ်သည် broadcast စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးလုံးဝအိုင်ပီ-enabled end-to-end teleprompting ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ချင်းအသိဉာဏျလုံးဝပစ္စည်းတွေအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများလိုအပျကွောငျး foolproof redundancy ပို့, ဘယ်နေရာမှာမဆိုတည်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Workflows ချက်ချင်း reinvents ။ သိသာထင်ရှားသောဟာ့ဒ်ဝဲတိုးတက်မှုနောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်မြှင့်တင်ရန်စဉ်ကဗီဒီယိုလက်ငင်း / သွင်းအားစုများ၏ပါဝင်မှုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာ IP ကိုမှပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ Intelligent ချက်ချင်းယူနစ်အများဆုံးအခြေအနေများတွင်အဘယ်သူမျှမ counterbalance လိုအပ်ကတည်းကသူတို့ counterbalance လိုအပ်မဖြေရှင်းနည်းများချက်ချင်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးရာခိုင်နှုန်းကို 50 အထိရှိပါတယ်။ တိုးချဲ့တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, ဒီအလေးချိန်လျှော့ချရေးကင်မရာကအထောက်အကူများအတွက် payload ပြဿနာများကိုလျှော့ချပေးခဲ့ခြင်းနှင့်စက်ရုပ်တပ်ဆင်မှုအတွက် on-ကင်မရာ teleprompters စံပြစေသည်။
2018 မှာ Autocue NAB ပြရန်: Teleprompter ခေါင်းဆောင်မှု
အဆိုပါ 2018 မှာ NAB ပြရန်, Autocue အိုင်ပက်ဖြေရှင်းချက်ထံမှ 17 လက်မနဲ့ 20 လက်မအရွယ် teleprompters နှစ်ဦးစလုံး၏ကုမ္ပဏီ၏မာစတာစီးရီးအထိထုတ်လွှင့် teleprompters ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Autocue လည်းအသစ်သော QBox v6 အသိဉာဏ်စာစောင်ကိုအင်ဂျင် feature ပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ QMaster ချက်ချင်းဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်း, QBox v6 dual-ကမ်းလှမ်း HDအဆိုပါ prompter မော်နီတာဗီဒီယိုပို့ဘို့ -SDI ရလဒ်။
"ဒီ NAB ပြရန် အမြဲ Autoscript နှင့် Autocue နှစ်ဦးစလုံးထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုမိတ်ဆက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်, ဒီနှစ်အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် Autoscript ရဲ့ဆုရ Intelligent ချက်ချင်းဖို့လုံးဝမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့သည့်တစ်ဦးအသိဉာဏ်အိုင်ပီ-enabled လုပ်ငန်းအသွားအလာန်းကျင်ဒီဇိုင်း teleprompting တစ်ဦးအမှန်တကယ်တော်လှန်ရေးချဉ်းကပ်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများဖေါ်ပြခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အောင်, အ Autocue အကွာအဝေးမှဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလည်းရှိပါလိမ့်မယ် Vitec Group မှတဲတစ် teleprompting စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်-တွေ့မြင်ရပေမည်။ "
- Ginny Grove, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်မန်နေဂျာ Autoscript / Autocue
Autoscript တစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, ထုတ်လွှင့်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် teleprompting ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ 1984 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Autoscript ကွန်ရက်များနှင့်ရပ်-တစ်ဦးတည်းစစ်ဆင်ရေးနှစ်ခုလုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ပရီမီယံအရည်အသွေးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်တယ်။ Autoscript ရဲ့အသစ် Intelligent သတိပေးစနစ်ကကမ္ဘာ့သာအပြည့်အဝအိုင်ပီ-enabled end-to-end ချက်ချင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆန်းသစ် EVO-IP ကို ​​prompt ကိုမော်နီတာအပါအဝင်အသိဉာဏ်ချက်ချင်းပစ္စည်းတွေ, WinPlus-အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုလက်လှမ်းနှင့်အတူမည်သည့်တည်နေရာအတွက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးအားဖွင့်တစ်ဦးရဲ့ IP ကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုချက်ချင်းမှချိတ်ဆက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.autoscript.tv.
Autocue အဆိုပါ 1950s မှာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်ကတည်းကထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ teleprompters ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ Autocue တိုင်းစျေးနှုန်းအမှတ်မှာဦးဆောင်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်နှင့်အတူအကျယ်ပြန့် teleprompter အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ သောင်းချီသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီအဖြစ် High-end ထုတ်လွှင့်ရန်ကျောင်းများ, အစိုးရအဆောက်အဦ, ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် -from အား NBC, MBC, Doordarshan, TF1 နှင့် CNN က - သူတို့ရဲ့ teleprompting လိုအပ်ချက်များအတွက် Autocue အပေါ်အားကိုး။ Autocue ရဲ့ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်သည် MOS protocol ကို (ဥပမာ, AP ENPS, aq အသံလွှင့်ထောကျပံ့ပေးသမျှသောသတင်းကဏ္ဍစနစ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ လွန်စွာလိုလားသော iNews, Dalet သတင်းများ Suite နှင့်ရေဘဝဲ) ။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, Autocue iPad နဲ့ iPhone teleprompter ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.autocue.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/180228-AutoscriptAutocue.docx
Image ကို Downloads:
Autoscript ရဲ့နယူး Intelligent သတိပေးစနစ်
Dual-အတူ Autocue ရဲ့နယူး QBox v6 Intelligent Scroll အင်ဂျင် HD-SDI ထုတ်ပေးမှု။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20is%20ready%20for%20Las%20Vegas%20and%20will%20be%20showing%20the%20industry%27s%20FIRST%20IP-enabled%20prompting%20solution%202018%20%23NABShow.%20%20-%20http://bit.ly/2GMXHdt%[အီးမေးလျ protected]
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2018 NAB ပြရန် Autocue Autoscript ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow Display ကိုအပေါ်ထုတ်ကုန်များ 2018-02-28
ယခင်: အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Vinten ထုတ်ကုန်များ
နောက်တစ်ခု: ဆုရရုပ်ရှင် ioGates နှင့်အတူ '' အဆိုပါရင်ပြင် '' အစုရှယ်ယာနေ့စဉ်လုံလုံခြုံခြုံ